China sy GN101 / Vridis GN108 maintso maintso sy mpanamboatra | Baizan
Niorina tamin'ny taona 1999, nandritra ny taona maro nivoarana, Baizan dia nanangana kolotsaina orinasa tsy manam-paharoa izay misy rafitra fitantanana henjana, mpisava lalana mitohy, laza maharitra, fahafaham-po ny mpanjifa, ary politika mandresy. Mandritra izany fotoana izany, manana ahiahy fatratra izahay amin'ny fampandrosoana ny toekarena manerantany. Nandritra izay taona lasa izay, ny orinasanay dia mivoatra tsara ary mankafy laza tsara eo amin'ireo mpanjifantsika amin'ny sehatry ny fingotra sy plastika, fanafody ary angovo. Amin'izao fotoana izao, ny orinasanay dia manana toby famokarana telo any Shanghai, Zhejiang, ary Chongqing miaraka amin'ny tany 667 hektara ary mpiasa 500, 15% amin'izy ireo dia mpiasa teknika manokana. Baizan dia manaraka ny fitsipiky ny mpivarotra sy mifantoka amin'ny tsena. Ny paikadinay dia ny manolotra tsy tapaka vokatra manana kalitao tena tsara, vidiny mirary ary serivisy tsara alohan'ny sy aorian'ny fivarotana.
● Fonosana ivelany: Anisan'izany ny fonosana kitapo hazo sy fonosana boaty misy varingarina.
a) Tranga hazo --- Vita amin'ny alàlan'ny akora vita amin'ny fumigation maimaim-poana, vita pirinty "Baizan Logo", "PVB Interlayer Film", "Ivon-toerana fanaraha-maso sy fitsapana ny mari-pahaizana momba ny simika" ary ny "haben'ny antsipirihany, ny daty famokarana ary ny isan'ny Roll". Eo ambanin'ny Pallet ho an'ny Forklift vita amin'ny hazo malemy na hazo fumigation maimaim-poana.
b) boaty vita amin'ny tavoahangy --- Vita amin'ny taratasy, fonony hazo fumigation maimaimpoana ary faribolana vy. Natonta ny "logo Baizan", "Sarimihetsika PVB Interlayer", "habe amin'ny antsipirihany, daty famokarana ary isan'ny horonan-taratasy", ny paleta hazo misaraka tsirairay avy dia afaka mamoaka baoritra efatra.
● Fonosana anatiny: Ny sarimihetsika PVB dia nifangaro ary tototry ny fifangaroan'ny PE. Ny kitapo dia nesorin'ny kitapo aluminium foil. Ny marika fanamarinana niraikitra teo ivelan'ny kitapo alimo.
Previous: T101 mena / volontany T108 / volontany T103
Manaraka: Fotsy fotsy M104 / Milky fotsy M102 / Opaque fotsy M101
Manga amin'ny mazava C101
pvb fiara madio
Manga manga mavomavo manga BD102